(၂၁-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၃၂၇၇.၀၄) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၆၄၇၈၉.၅) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ ၁၉.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ
စဉ် မြို့နယ် CT 100/5A CT 150/5A CT 200/5A
စာရင်း ဖွင့် ရရှိ စုစု ပေါင်း ထုတ် ပေး လက် ကျန် စာရင်း ဖွင့် ရရှိ စုစု ပေါင်း ထုတ် ပေး လက် ကျန် စာရင်း ဖွင့် ရရှိ စုစု ပေါင်း ထုတ် ပေး လက် ကျန်
(ရုံးချုပ်)9996615555
၁ အရှေ့ပိုင်း 1
စဉ် မြို့နယ် CT 250/5A CT 300/5A CT 400/5A
(ရုံးချုပ်)33322266 1 5
၂ အနောက်ပိုင်း 1
စဉ် မြို့နယ် CT 500/5A CT 600/5A CT 800/5A
(ရုံးချုပ်) 1 1 1 11 11 11
(၁၈.၅.၂၀၁၉) မှ (၂၄.၅.၂၀၁၉) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
စဉ် မြို့နယ် 1Ø2W 10/30 A(Analog) 1Ø2W 10/30 A (Digital) 3Ø4W 10/30 A (Analog)
စာရင်း ဖွင့် Test Lab Return ရရှိ စုစု ပေါင်း ထုတ် ပေး လက် ကျန် စာရင်း ဖွင့် Test Lab Return ရရှိ စုစု ပေါင်း ထုတ် ပေး လက် ကျန် စာရင်း ဖွင့် Test Lab Return ရရှိ စုစု ပေါင်း ထုတ် ပေး လက် ကျန်
(ရုံးချုပ်) 765 765 202 563 251 251 200 51 8,274 8,274 100 8,174
၁ အရှေ့ပိုင်း 200
၃ တောင်ပိုင်း 90
၄ မြောက်ပိုင်း 112 100
စဉ် မြို့နယ် 3Ø4W 20/60 A(Analog) 3Ø4W 30/80 A(Analog) 3Ø4W 50/100 A(Analog)
(ရုံးချုပ်) 6871 6,871 100 6,771 5,656 5,656 101 5,555 205 205 205
၄ မြောက်ပိုင်း 100 101
စဉ် မြို့နယ် 3Ø4W 100/150 A (Analog) 3Ø4W 10/30 A (Digital) 3Ø4W 20/60 A(Digital)
(ရုံးချုပ်) 456 456 456222444
စဉ် မြို့နယ် 3Ø4W 30/80 A(Digital)
စာရင်း ဖွင့် Test Lab Return ရရှိ စုစု ပေါင်း ထုတ် ပေး လက် ကျန်
(ရုံးချုပ်)22 2
Download Link : Weekly_EWSN_Meter(Yangon_East).pdf
Download Link : Weekly_EWSN_Meter(Yangon_West).pdf
Download Link : Weekly_EWSN_Meter(Yangon_South).pdf
Download Link : Weekly_EWSN_Meter_(Yangon_North).pdf
Post under by : ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(YESC)
- လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
- ACSR Conductor for National Electrification Project
- Concrete Poles for National Electrification Project
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ၂၃၀ ကေဗွီ ရွှေဘိုပင်မဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်းနှင့် ၂၃၀ကေဗွီ အုန်းတော ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kerem Divanlioglu အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၉.၉.၂၀၁၉ရက်နေ့မှ ၁၃.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)​​​​​​​
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၁.၉.၂၀၁၉ရက်နေ့မှ ၈.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)​​​​​​​
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၈.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့မှ ၃၁.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ (၃၁.၈.၂၀၁၉) မှ (၆.၉.၂၀၁၉) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ (၂၄.၈.၂၀၁၉) မှ (၃၀.၈.၂၀၁၉) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၉.၉.၂၀၁၉)